Xildhibaan Sakariye Gaashaan oo ku laabtay deegaankii laga soo doortay – Kalfadhi
Xildhibaan Sakariye Gaashaan oo ka mid ah Xildhibaanadda Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa sheegay in ay dhaqan gashay dib u hishiisiintii laga dhex sameeyay beelo walaala ah oo dega degaanada Xiraale iyo Huurshe, ee Maamulka Galmudug.
” Waxaa ii muuqata in si sax ah oo samaxaadi ku jirto loo heshiiyay” ayuu Kalfadhi ku yiri Xildhibaan Sakariye.
Xildhibaan Sakariye Gaashaan ayaa sheegay in uu kulamo gaar gaar ah la qaatay odeyaasha dhaqanka ee ku sugan Xiraale iyo Huurshe, waxa uuna ku ammaanay dedaalka nabada ee ay sameysay Xukumadda Soomaaliya, gaar ahaana Raysul Wasaare Xasan Cali Khayre oo wada hadal iskugu keenay dhinacyadii dagaalsanaa .
Mar uu ka hadlayay safarkiisa deegaanada Galmudug waxa uu sheegay in Ujeedka ugu wayn uu ahaa in uu dib ugu laabto halkii laga soo toortay
“Xildhibaanka waxaa waajib ku ah xilliga fasaxa in uu dadkiisa ku laabto ”
Xildhibaannada Golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay ku jiraan xilliga fasaxa waxaana aad u yar tirada mudenayaasha ku laabtay deegaanadii laga soo doortay.
Xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed oo ka hadlay wararka sheegaya muddo kordhinta dowladda Soomaaliya